Nagu saabsan - Wisdom Birta Composites Co., Ltd.
Alucosun, oo ah sumadda cusub ee suuqa loo yaqaan 'Aluminium Composite Panel'! Kooxdayadu waxay khibrad u leedahay in ka badan 20 sano 'Aluminium Iskuduwaha Waxsoosaarka' Aluminium, laga bilaabo Soo-saarka illaa Horumarinta Wax soo saarka. Waxaan hadda diyaar u nahay inaan noqono soo saaraha ugu horreeya adduunka ee leh teknolojiyaddii ugu dambeysay iyo macaamiil heer sare ah oo daryeel iyo taageero ah
Laga soo bilaabo bilowgii, Alucosun waxay indhaheeda ku haysay furitaanka safarka oo dhan, laga soo bilaabo korsashada alaabta ceyriinka illaa sheyga ugu dambeeya. Dhinac kasta oo ka imanaya naqshadeynta illaa soosaarka waxaa lagu fuliyaa nidaamka xakamaynta tayada - oo si dhammaystiran uga kooban kormeerayaal xirfadlayaal ah iyo qalabka shaybaarka ee horumarsan, iyadoo la hubinayo in dhammaan alaabooyinka ay waafaqsan yihiin heerarka caalamiga ah: European German DIN, Commonwealth UK BS, American ASTM, Middle East iyo iwm.
Kooxda Alucosun waxaa ka go'an inay taageeraan macaamiisheenna iyagoo siinaya waqtiga la keenayo alaabooyinka aadka u kalsoon ee la isku halleyn karo iyo adeegyada qiimaha gaarka ah leh. Dhammaan arrimahan ayaa kaa caawin kara helitaanka faa'iidada tartanka suuqaaga. Waxaan hiigsaneynaa inaan sii wadno himiladeena iyo himiladeena annagoo si joogto ah u raadinayna horumarin iyo horumar iyadoo la adeegsanayo waxbarasho iyo waxbarasho joogto ah. Waxaan hiigsaneynaa inaan horumarino tikniyoolajiyad cusub iyo dhaqamada ugu wanaagsan ee ganacsiga. Sii waditaan buuxa, shaqaalaheenu waa hankeena, waxaana ujeedkeenu yahay inaan siino jawi wanaagsan, kobcin iyo koriin ujeedo leh oo shaqaalaheena ku dhiiri geliya inay noqdaan kuwo wax soo saar sare leh isla markaana shaqsi ahaan iyo xirfad ahaanba u koraan.
waxaan wadaagnaa caqiidada guud ee aan kaliya aheyn caqliga, laakiin sidoo kale dabeecadda go'aamin karta mustaqbalkeena.
Kaalay inaad nalashaqeyso oo naga dhig lammaane laysku halleyn karo!
Alucosun waxaa lagu qalabeeyaa laba daahan iyo shan xariiq oo wax soo saar lamination ah (xad dhaaf ah 2000mm-width ah ayaa lagu daray). In kabadan 20 sano oo waayo aragnimo ah Alucosun waxay ku baahisay baalasheeda aduunka iyadoo macaamiisheeda siineysa alaab xasiloon oo tayo leh.
1) Faahfaahinta qalabka:
Mashiinnada fuuli jiray & dib u-habeynta 3 nooc
Khadadka Nadiifinta Kiimikada 2 nooc
Khadadka Daboolka Xawaaraha 2 nooc
Khadadka Qaab dhismeedka 5 nooc
2) Awood wax soo saar / Sanad:
Guddiyada Isku-darka Aluminium 7.6 milyan / sqm
Aluminium Aluminium Lattic ah 1 milyan / sqm
Aluminium daboolan dahaarka 18500 tan